Waxyaabaha Sameeya iyo Waxyaabaha Sameeya Fasaxyada Fasaxyada Sida ku cad 99designs | Martech Zone
Habeennadu way aamusan yihiin, riyooyinka ayaa qallalaya, macaamiishaaduna waxay furayaan boorsooyinkooda. Haddii aad ka dhigi kartid qaybtaada nooc ka mid ah xilligooda fasaxa hab dabiici ah oo soo jiidasho leh, waxay si fiican kuu xusuusan doonaan Sannadka Cusub. Halkan waxaa ku yaal xoogaa waxtar leh oo ah Waxyaabaha iyo Waxyaalaha aan kaa caawinayno inaad kaa gudubto xilliga.
Samee: ilaali xaqiiqadaada
Haddii durdurintaada caadiga ah ee warbaahinta bulshada ay ka kooban tahay kaftan xasaasi ah, ku dhajinta farriimaha macaan ee ay ka buuxaan farxadda fasaxa ayaa dhagaystayaashaada ugu ridi doona wax aan caadi ahayn. Calaamadahaaga maskaxda ku hay sida aad u ilaalineyso ciidaha. Ku dhufo kaararkaaga fasaxyada haddii aad caadi ahaan la xiriirto kaftan. Hadana haddii aad ilaaliso mid culus oo shirkadeed sanadka intiisa kale, ku dheji dareenka daacadnimada ama kaftanka-qiimeynta G ee qalabkaaga fasaxa.
Ha yeelin: cidna ha uga bixin
In kasta oo astaamaha 'Hallmark' aad rumaysan lahayd, haddana qof kastaa uma dabaaldego Kirismaska. Sida laga soo xigtay Pew Research, Boqolkiiba 92 dadka Mareykanka ah ayaa ilaaliya ciida. Ilaa ay calaamaddaadu ku saleysan tahay iimaan, ka dhig suuqgeyntaada ciidaha si guud oo guud si aad uga codsatid boqolkiiba 100 dhagaystayaashaada. Ku xayeysii "iibka fasaxa" halkii aad ka iibin lahayd "iibka Kirismaska," u dir kaararka ku dhawaaqaya "Wax Walba oo Farxad leh" oo farriimo ku dhaji khadadkaaga warbaahinta bulshada ee u dabbaaldegaya fasax kasta oo jiilaal ah markay yimaadaan.
Samee: dib u bixi
Bixinta sadaqadu waxay faa'iido u leedahay labada karmo iyo khadkaaga hoose. Waa hab magacaaga loogu soo bandhigo bulshadaada oo shaqaalahaaga looga dhigo inay ku qancaan la shaqeynta shirkad hufan.
Ha ku darin wax xayeysiis ah ama garoonno iib ah ciidahaaga dadaal bixinta; waa wax muuqda oo hufan Laakiin waxaad ka heli kartaa habab aad si aan kala go 'lahayn ugu xirtid himiladdaada xagga sadaqaddaada sadaqadda ah. Tusaale ahaan, shirkad sawireed ayaa laga yaabaa inay bixiso naqshadeynta iyo daabacaadda barnaamijyada loogu talagalay dhacdooyinka fasaxa bulshada ee maxalliga ah ama socodsiinta tartan curis ah oo lagu abaalmariyo adeegyada naqshadeynta websaydhka bilaashka ah ee ganacsatada halgamaya
Shaqaalahaagana ka qayb geli! Weydiiso fikradahooda qaababka lagu caawin karo bulshada xilligan ciidaha ah. Waxaa laga yaabaa inaad korsato qoysaska baahan ee maxalliga ah oo aad siiso hadiyado iyo cunto, ama waxaad shaqaalaha siisaa maalin fasax ah oo ay ku qaataan hadiyado duudduub ah hay'ad samafal oo maxalli ah si ay u qaybiso.
Ha sameyn: ka gudub
Gubashada fasaxa waa dhab. Dad badan waxay dareemaan culays iyo daal markay soconayaan Diisambar. Ha ku qarxin macaamiishaada xusuusinta emaylka ama ha weydiinin shaqaalahaaga inay ka quustaan ​​Sabti kasta si ay uga shaqeeyaan ololahaaga sadaqada ah. Iyo waxaas oo dhan waa muqaddas, ha u oggolaan shaqaalahaaga inay shaqeeyaan goor dambe Habeenkii Kirismaska ​​ama Sannadka Cusub haddii aad caawin karto. Qeyb ka mid ah guusha shirkaddaada waxay kuxirantahay farxad gelinta shaqaalaha wanaagsan.
Samee: dir kaararka dhabta ah
Sida waraaqda snail ay u marto dariiqa dinosaurs-ka, dirista kaararka dhabta ah waxay ku siinaysaa fursad aad kaga istaagtid baakadka oo aad waxyar u suuq geyn karto. Abuur kaar pop-up ah, ku dar erey xujo ah oo muujinaya farriinta ciida ama soo uruuri isku-darka quruxda badan ee carruurta shaqaalaha ah iyo xayawaannada xirashada koofiyadaha fasaxa. Farsamada a fariin gaar ah macaamiishaada iyo ganacsigaaga, ama u soo bandhig wax ay dhagaystayaashaadu isticmaali karaan. Ku dar kuubbo ah mid wanaagsan bisha Janaayo ama birjeex gaar ah oo qaboojiye ah.
Ha yeelin: xaflad curyaan ah
Haddii aad maamusho ganacsi hal qof ah, habeen kasta wuxuu noqon karaa xafladda xafiiskaaga fasaxa. Laakiin koox weyn, tuurista munaasabad ciideed waxay gacan ka geysan kartaa xoojinta niyadda kooxeed - haddii dadku runtii rabaan inay ka qaybgalaan. Abaabulaan waxqabad aan caadi ahayn, sida ciyaar ah ciyaar calaamadeysan laser ama bowling. Haddii qof kasta oo kooxdaada ka mid ahi jecel yihiin inay cabitaankooda cabaan, u kac khamri ama khamri maxalli ah. Kaliya hubso in dadka aan rabin inay kaqaybqaataan waxqabadka ay wali xaadiri karaan oo ku raaxaysan karaan.
Haddii miisaaniyaddaadu u oggolaan lahayd oo keliya qolka nasashada ee qolka nasashada, tixgeli inaad ka booddo gebi ahaanba. Taa baddalkeeda, u oggolow shaqaalaha inay soo baxaan dhowr saacadood ka hor sidii caadiga ahayd oo ay u dhiibaan kaararka hadiyadaha makhaayadaha Kuwa doonaya inay raashinka wada aadi karaan, kuwa kalena way ku raaxeysan karaan waqtiga fasaxa ah.
Weli waxaa ka go'an in la qabto xaflad dhaqameed xafiis? Qorsheyso habeen jimce ah bilowga Diseembar. Xafladaha toddobaadlaha ah way ku adag tahay waalidiinta mashquulsan inay maareeyaan, shaqaaluhuna waxay yeelan karaan qorshooyin kale maaddaama dhammaadka bisha ay soo dhowdahay.
Samee: labisto booskaaga
Sida Whos down ee Whoville, u soo qaad qurxintaada si xoog leh. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto intee in le'eg oo soo dhaweyn leh xafiis kale oo dharbaaxo leh ayaa dareemi doona dhowr qaybood oo nalalka iftiinka ah, qaar dhir midab leh, shumac xaabo ah iyo baraf dhalaalaya oo dhalaalaya.
Ma isweydiineysaa maxaad isku mashquulin laheyd qurxinta haddii macaamiisha aysan inta badan imaan xafiiskaaga? Ku dhaji sawirrada qurxintaada marinnadaaga warbaahinta bulshada si aad u muujiso ruuxaaga damaashaadka. Waxaad sidoo kale kaheli kartaa dhagaystayaashaada inay kuu yimaadaan adoo abaabulaya cunto, dhar ama wadista hadiyadaha. Sii kuubano yaryar ama faaiido kale oo aad ku beddesho ka-noqoshada deeqaha. Shaqaalahaaga ayaa la tacaali kara baakadaha iyo gaarsiinta deeqaha, markay macaamiisha soo galaanna, waxaa ku raaxeysan doona qurxintaada waxayna u eegi karaan adeegyada aad bixin karto.
Hal digniin: Illaa aad adigu socodsiiso adeegga isbarashada, misletoe boos kuma lahan xafiiska.
Tags: samee oo ha yeelinfasaxakaararka fasaxaxafladaha ciida